ဂျပန်ကုမ္ပဏီ တစ်ခုက စပါးခွံနှင့် မြေပဲခွံများကို အသုံးပြုပြီး လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်မည့် စမ်းသပ် - Yangon Media Group
ဂျပန်ကုမ္ပဏီ တစ်ခုက စပါးခွံနှင့် မြေပဲခွံများကို အသုံးပြုပြီး လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်မည့် စမ်းသပ်
ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပေါများစွာရှိသော စပါးခွံ၊ မြေပဲခွံများကို အသုံးပြုပြီး ဂျပန် နိုင်ငံနည်းပညာဖြစ်သော Stirling Engin ဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ရန် စမ်းသပ်မှုအောင်မြင် ကြောင်း TAKINO KOGYO CO., LTD မှ ဥက္ကဋ္ဌ AKIRA TAKINO က ပြောသည်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက်က ရန်ကုန်မြို့၊ ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း အနီးအမှတ်(၂၄) ဒီ၊ သန့်ဇင်လမ်းသွယ်(၁)တွင် Biomass များကို အသုံးပြုပြီး Stirling Engine ဖြင့် လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်နိုင်မှုများကို ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ကုမ္ပဏီ၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သုတေသနနှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန၊ မြန်မာပြန်ပြည့်မြဲစွမ်း အင်အသင်းတို့က ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်သည်။ TAKINOKOGYO Co., LTD မှ ဥက္ကဋ္ဌ AKIRA TAKINO က ”မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ အခြေအနေဖြစ်ဖို့ စမ်းသပ်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကနေ ပြီးတောင်္ကြင်းကျန်တဲ့စွန့်ပစ်ပစ္စည်း တွေမှာအခုချိန်ထိ စပါးခွံတစ်မျိုးထဲကနေပြီးတော့ပဲ လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ် တာကိုအသုံးပြုခဲ့ပြီး ကျန်တာတွေကို အသုံးပြုခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ အခု စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍကနေ ထွက်လာတဲ့စပါးခွံ တစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ဘဲ၊ မြေပဲခွံ၊ ပဲစင်းငုံအရိုးတွေနေပြီးတော့လည်း လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်”ဟုပြောသည်။
ယင်းကဲ့သို့ သုတေသနစမ်းသပ်မှုများကို ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် ဂျပန်နိုင်ငံသဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနက ထောက်ပံ့မှုများပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ TAKINOKOGYO Co., LTD မှ ဥက္ကဋ္ဌ AKIRA TAKINO က” ဒီစက်ရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကတော့ မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဟာကို ထုတ်လုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် ညှိနှိုင်းဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့ဆိုရင် တော့ ဈေးအရမ်းမြင့်ပါတယ်။ သို့ သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကိုက်ညီမယ့် အခြေအနေကို လုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ စမ်းသပ်တဲ့ စက်ဆိုရင် (၃) ကီလိုဝပ်ထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကုန်ကြမ်းအနေ နဲ့ကတော့ ဒီစက်လည်ပတ်ဖို့အတွက်တစ်နာရီကို စပါးခွံ ၁၈ ကီလိုဂရမ်လိုအပ်ပါတယ်”ဟုပြောသည်။ လျှပ်စစ်မီးမရရှိသေးသည့် ဒေသများအတွက် လျှပ်စစ်မီးအမြန်ဆုံးရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါစက် ကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုများလည်းမရှိကြောင်း သိရသည်။
ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး မြန်မာ့ ပြန်ပြည့်မြဲ စွမ်းအင်အသင်းအထွေ ထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးအောင်မြင့်က”သူတို့ကဆရာတို့အဖွဲ့နဲ့ ပေါင်းပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ Survey တွေ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ အခုဒီစက်ကိုဈေးလည်း လျော့နည်းသွားအောင် ရေရှည်လည်းမြန်မာ့နိုင်ငံရဲ့ Biomass ကုန်ကြမ်းတွေနဲ့လည်း ကိုက် အောင် ဆက်လက်ပြီးလေ့လာမှု တွေလုပ်ဆောင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ အင်ဂျင်သုံးနေတာတွေကို ဒါနဲ့အစားထိုးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်”ဟုပြောသည်။ အဆိုပါ စမ်းသပ်မှုများသည် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှု ဦးစီးဌာနနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံ Asia Air Survey ကုမ္ပဏီနဲ့တို့ရေးထိုးထားသည့် နားလည်မှုစာချွန်လွှာများမှ ကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် စာရင်းဝင်ရေး လာမည့် ဧပြီတွင် ယူနက်စကိုသို့ အချက်အလ?
သက်သေခံ မလာခြင်းကိစ္စ ဥပဒေအရ တိတိကျကျလုပ်ရန် တရားရုံးများတွင်လည်း တာဝန်ရှိ၊ သမ္မန်စာထုတ်ပြီ
အင်းစိန်လမ်းဆုံ မီးပွိုင့်အနီး ကိုယ်ပိုင်ယာဉ် ဘရိတ်ပေါက် လမ်းဘေးဓာတ်တိုင် ဝင်တိုက်၊ ဓာတ်တ
ကလေးစစ်သားဟောင်း ကိုအောင်ကိုထွေးအား ထပ်မံစွဲဆိုထားသည့် အမှု ယခုလနောက်ဆုံးပတ် အတွင်း စတင် စ??
မြဝတီမြို့၌ ထိုင်းဘတ်ငွေ ဈေးမြင့်တက်နေမှုကြောင့် ထိုင်းစားကုန်ပစ္စည်းများ အရောင်းထိုင်း
အယ်လ်ဘမ် အသစ်ကို အခြေတည်ပြီး ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးမယ့် ဂျေဒန် စမစ်
ကဆုန် လပြည့်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့နန်းမြို့ရိုး ကျုံးထောင့်လေးထောင့်၌ အန္တရာယ်ကင်း ပရိတ်ရွတ်?